फिल्म त चल्यो, तर खुश्वुलाई भएन फाइदा ? « Mazzako Online
फिल्म त चल्यो, तर खुश्वुलाई भएन फाइदा ?
फिल्म नचल्दा सम्म चलेन भन्ने पिर । चलेपछि दर्शक हलमा आएनन् भन्ने पिर । नेपाली फिल्मका केही कलाकार यस्तै पिरमा दौडिरहेका छन् । अभिनेत्री खुश्वु खड्काको जीवनमा पनि यस्तै भएको छ । फिल्म गर्नु र राम्रो फिल्म गर्नु फरक कुरा हो । तर, खुश्वु अहिले मैले फिल्म गरेको छु भन्ने लाइनमा मात्र छिन् ।
उनले अभिनय गरेको फिल्म ‘दिपज्योती’ शुक्रबारबाट रिलिज भयो । यो फिल्म हलमा लागेको नै दर्शकले थाहा पाएनन् । यसैले, फिल्म हलमा त चल्यो तर दर्शक आएनन् । जसले यो फिल्मकी अभिनेत्री खुश्वु खड्कालाई केही फाइदा भएन ।
फिल्म रिलिज नहुँदासम्म खुश्वुलाई तनाव थियो । अहिले उनी अभिनित फिल्म रिलिज हुन थालेपछि उनलाई पिर नै छ । नचल्दा चलेन भन्ने पिर, चलेपछि दर्शक आएनन् भन्ने पिर । यसरि त खुश्वुको करिअर कसरि उभो लाग्ला र खै ?